ज्योती मगरमाथी आँखा लगाउने यि प्रहरी को हुन् ? – Etajakhabar
ज्योती मगरमाथी आँखा लगाउने यि प्रहरी को हुन् ?
काठमाडौँ – चर्चित गायिका ज्योगी मगर र गायक तेजस रेग्मीको अवाजमा सजिएको रमाइलो गीत स्याल कुखुरी’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भए लगत्तै निकै चर्चा पाएको छ । गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छोटो समयमा नै गीतले सांगीतिक बजारमा राम्रो चर्चा कमाएसँगै भिडियो ट्रेन्डिगंमा पर्न सफल भएको छ । तेजसकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतको भिडियोलाई निर्देशक सरोज रोशन भट्टराइले रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेको भिडियो यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ८० हजारले हेरीसकेका छन् भने भिडियो ट्रेण्डिगंको १५ औँ नम्बरमा परेको छ ।
सुजन शाहीको सम्पादन रहेको भिडियोमा यादव देवकोटा, ज्योती मगर र राजु भुजेलले मोडलिङ गरेका छन् । ज्योतीले भिडियोमा आफ्ना प्रेमी सरापेलाई दुध खुवाउनेदेखि एक्लै भेट्ने र रमाइलो गर्नेसम्मका कुराकानी गरेका छन् ।
युटुबमा अहिले यो गीतले चर्चा पाइरहेको छ । भिडियोमा सरापे’ नामले परिचित यादव देवकोटालाई विभिन्न ५ गेटअपमा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोलाई दर्शकले अत्यधिक रुचाएसँगै ट्रेण्डिगंमा समेत परेको छ । भिडियोलाई कामना डिजिटल प्रालीले बजार ब्यबस्थापन गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १९, २०७४ समय: ९:२६:५१